नेपाल आज | बजारमा आउँदै छ यस्तो किताब जसको नाम तपाईले भन्न पनि सक्नुहुन्न !
बजारमा आउँदै छ यस्तो किताब जसको नाम तपाईले भन्न पनि सक्नुहुन्न !
शुक्रबार, १९ कार्तिक २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज (MG)
लेखक परिचित पात्र हुन् । विश्वका प्रशिद्ध विश्वविद्यालयमा पढेका उनी आफूलाई नेपालको सबैभन्दा धेरै प्रमाणपत्रधारी व्यक्तिका रुपमा चिनाउछन् । तर सजिलै भन्छन्, ‘मैले पढेको ज्ञान व्यर्थ रहेछ । प्रकृति लुकाएर अर्कै पढाइएको रहेछ । जीवन जगतको अपव्याख्या गरिएको रहेछ ।’ संयुक्त राष्ट्र संघमा कृषि बैज्ञानिकरुपमा काम गरिसकेका उनी पछिल्लो समय राजनीतिमा सक्रिय छन् । उनी अर्थात कृषि बैज्ञानिक मदन राईले किताब भने विल्कुल फरक विधामा लेख्दैछन् । यस्तो किताव जसको शिर्षकले नै समाजमा तरंग पैदा गर्नेछ । उस्तै परे उनीमाथि आलोचनाको वर्षा हुनेछ र सामाजिक बहिष्कारपनि ।
‘सुकरातलाई बिष खुवाएर मारियो जबकी सुकरात भविष्यद्रष्टा थिए । गौतम बुद्धले दरबार छोडेर हिडे जबकी उनी भौतिकरुपमा सुखसयलमा थिए । म त सामान्य मान्छे हुँ, समाजले पक्कै प्रहार गर्ने छ । तर, जीवन जगत बुझेको नाताले मैले किताब लेख्नै पर्छ ।’ उनले प्रष्टिकरण दिंदै भने । राईका अनुसार संसारको समस्या र आनन्दको मुहान यौन हो । यौनलाई बन्देज गर्दा समस्या चुलिँदै गएको राईको दाबी छ । उनी तर्क गर्छन, ‘खाने मुखलाई लिपिष्टिक लगाएर चिटिक्क पार्ने, जन्माउने अंगलाई छोपेर लुकाउने ? त्यसैले मैले यस बारेमा खुला बहश गर्दैछु पुस्तक मार्फत ।’ विषय भनिसक्दा पनि उनले पुस्तकको नाम भन्न हिच्किचाइरहे । पटक पटक नामै सोधेपछि उनले थपे, ‘योनी, लिङ्ग र गुदद्वारलाई ठेट भाषामा के भनिन्छ त्यहीं नाममा पुस्तक लेख्दैछु । मेरो पुस्तकको नाम लाडो, पुती र कण्डो हो ।’
‘यस्तो किताव ? नामैले समस्या पार्ला ?’ उनी हच्किएनन्, ‘भन्नै नहुने भए शब्दकोषमा किन लेख्ने ? मैले भाषाविद् कमलमणि दिक्षित, नवलकिशोर राईलगायतलाई सोधेँ । ति शब्द बोल्दा फरक नपर्ने सुझाव पाएँ । जीवन जगतको मुहानका बारेमा किन लुकाएर कुरा गर्ने ?’ राईका अनुसार उनी किताव लेखनका लागि यौनका बारेमा परीक्षण गरिरहेका छन् । उनी यौनलाई परमानन्दसँग र भगवानका रुपमा व्याख्या गर्छन् । यसलाई लुकाउनै नहुने उनको धारणा छ । ‘शिब लिङ्ग के हो ? पार्वतीको योनी र शिबको लिङ्गलाई गएर ढोग्ने, आफ्नोलाई छोप्ने ? यो प्रकृति सँगत छैन ।’ उनको तर्क छ ।
परस्त्री गमन गरेको प्रष्ट बताउँने राई विवाहलाई बन्धन मान्दछन् । दुई श्रीमतीसँग बिहे गरेका राई भन्छन्, ‘मैले २ बिहे गरे । १३ बर्षमा पहिलो पटक यौन अनुभव गरेँ । जेठीसँग १० बर्ष सँगै बसे । कुरा मिलेन । उनीसँग बिच्छेद भयो । दोस्रीसँग ४४ बर्षदेखि सँगै छु । संसारकै सुखी जोडी हौँ हामी । यौनका बारेमा हामी एकअर्कालाई स्वतन्त्र छाड्छौँ ।’ विद्यालयमा यौन शिक्षा अनिवार्यरुपमा दिनुपर्ने उनको धारणा छ । व्यवस्थितरुपमा जोसँग पनि सम्भोग गर्दा हुने उनको भनाइ छ । उनी यौनलाई गोप्य र सिमित गर्दा अनेक समस्या आएको धारणा राख्छन् । ‘सारा समस्याको जड यौनमा गरिएको बन्देज हो । संसार डुलेपछि मैले तथ्य पत्ता लगाएँ । अब नलुकाइ लेख्छु । लेखे बापत मलाई गाली हान्लान्, गोली दाग्लान् । केही फरक पर्दैन । मैले ७० बर्ष बाँचे अब अर्कोरुपमा बाच्ने छु । म मरे पनि मेरो आत्मा मर्ने छैन । कसै न कसैले सत्य कुरा गर्नुपथ्र्यो, मैले गर्दैछु ।’
(कृषि बिद् मदन राईसँग सम्बन्धित समाचारमा प्रयोग गरिएका कतिपय शब्द अशिष्ट लाग्न सक्छन् । एक बिद्धानले लेख्न लागेको किताबको नाम नै नलेखी समाचार पूर्ण नहुने भएकाले लेखिएको हो । खुला बहशका लागि खुला अभिव्यक्ति दिएको राईको तर्क छ । उनले अझ प्रष्टरुपमा भिडियो अन्र्तवार्तामा विषय प्रष्ट गरेका छन् । किताबको विषय मुख्य गरी भिडियोको भाग दुईमा रहेको छ ।)
र योपनि, ► कृषि वैज्ञानिक मदन राई भन्छन्, ‘लिंग र योनी छोप्ने कुरा होइनन्’
madan rai's book